Otu onye nwụrụ, ọtụtụ merụrụ ahụ na mgbawa ụgbọ ala Uganda
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Otu onye nwụrụ, ọtụtụ merụrụ ahụ na mgbawa ụgbọ ala Uganda
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Otu onye nwụrụ, ọtụtụ merụrụ ahụ na mgbawa ụgbọ ala Uganda.
Mgbawa ụgbọ ala ahụ mere nanị ụbọchị abụọ ka ogbunigwe na-egbu egbu nke gburu otu onye ma merụọ atọ n'otu ebe a na-eri nri dị n'akụkụ okporo ụzọ na isi obodo Kampala na Satọde, nke ndị uwe ojii kpọrọ "omume ụjọ ụlọ".
Mgbawa na bọs dị nso Kampala gburu otu onye ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ.
Mwakpo ụgbọ ala sochiri ogbunigwe na-egbu egbu na Kampala, nke ISIL (ISIS) kwuru, nke gburu otu ma merụọ atọ ahụ.
Ndị uwe ojii Uganda bụ ndị ọkachamara gbasara ogbunigwe na-enyocha ebe ụgbọ ala gbawara na Lungala.
Ndị uwe ojii Uganda kwuputara na otu onye nwụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ merụrụ ahụ na mgbawa ụgbọ ala dị nso n'isi obodo obodo ahụ. Kampala.
Mgbawa dị egwu n'ime ụgbọ ala nke ụlọ ọrụ Swift Safaris mere taa, n'ihe dịka elekere ise nke mgbede obodo.
Mmadụ atọ banyere n'ebe a na-eri nri ebe a na-esa anụ ezi wee hapụ akpa rọba nke ihe dị n'ime ya gbawara.
Ndị uwe ojii ekwuputabeghị njide ọ bụla.
Otu ISIL (ISIS) kwuru na ọ bụ ya kpatara mwakpo Kampala.
E zigara ndị uwe ojii Uganda ọkachamara n'ịgba ogbunigwe n'ebe ogbunigwe ahụ dị na Lungala ka ha nyocha ihe mgbawa ahụ.
Lungala dị ihe dịka 35km (kilomita 22) ọdịda anyanwụ nke Kampala, n'otu n'ime okporo ụzọ mba ahụ na-ekwo ekwo, jikọtara Uganda na Tanzania, Rwanda, Burundi na Democratic Republic of Congo.
Dị ka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii si kwuo, agbachiela ebe ahụ ka ọ na-eche nyocha na nyocha nke ọma site n'aka ndị ọkachamara na-ahụ maka bọmbụ, ndị uwe ojii ga-enye kwa oge mmelite gbasara ihe ahụ merenụ.
Ndị uwe ojii Uganda wepụtakwara mgbazi na-ekwu na otu onye nwụrụ na mwakpo a, ka nkwupụta mbụ kwuru na mmadụ abụọ nwụrụ.
Onye isi ala Uganda Yoweri Museveni na tweet kwuru na "ịchụ nta" maka ndị na-eme ihe ọjọọ na-aga n'ihu nakwa na "ihe ndị ahụ doro anya ma dị ukwuu".